Kala beddelashada Xogta laga ZTE si macruufka Devices
Marka aad la isticmaalayo qalab labo bilood ama ka sano, dhammaan macluumaadka aad u muhiim ah iyo macluumaad shakhsi ah uu ku kaydsan waxa ku jira in ka dhigaysa qalab sanduuq maal, xogta la taaban karin. Mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee aad la kulmi on go'aansan in ay u baddashaan casriga cusub waa sida si ay u gudbiyaan maal, in ka phone jir ah mid cusub. Waa sahlan tahay in lagu wareejiyo files u dhexeeya laba casriga ah in ay ka shaqeeyaan nidaamka qalliinka isku mid. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado wareejinta macluumaadka u dhexeeya casriga ah ee ka hawlgala ku dhufto ee kala duwan, waxa uu noqonayaa mid hawl aad u dhib.
Haddii aad ayaa qorsheyneysa inay lasoo wareegto ka ZTE in qalab macruufka ah, ay u badan tahay in ay la kulmaan a predicaments yar, sida horay kor lagu soo sharxay aad. Haddii aan hab sax ah iyo qalabka ku habboon, geeddi-socodka wareejinta xogta aad noqonayaa culaab.
Habka inta badan la isticmaalo xaalad noocan oo kale ah waa adigoo isticmaalaya PC sida a go-u dhexeeya. Habkan waxaa loo baahan yahay in aad marka hore aad nuqulka xogta ka qalab ZTE in kombuutarka. Ka dib waa in aad u guurto xogta soo guuriyeen ka PC aad qalab macruufka ah. In kasta oo habkani leeyahay waa ka fudud yahay ma sida in aad kala soo bixi qalab dhinac saddexaad, waxa ay leedahay khasaaraha badan.
Arrimood oo waaweyn ayaa aad la kulmi kartaa halka xogta ka ZTE wareejinta qalab macruufka ah halka socda habka qadiimo hoos ku qoran:
• Geedi socodka waa waqti lumis iyo galayo sidii aad u leeyihiin in ay qaataan xanuunkii soo xirashada iyo goynta qalabka aad - hal mar ah.
• Sababo la xiriira kala duwan yihiin ee dhufto ee nidaamka qalliinka, files badan oo laga yaabaa in aan lagu taageeray by qalab macruufka.
• Ma wareejin karaan farriimaha qoraalka ah iyo xiriirada aan codsiga dhinac saddexaad ah.
Waxaad baxsasho karaa dhibaatooyinka kor ku siiyey socda hab oo kala duwan wadajir u baahan in degsado ah qalab saddexaad-qayb.
Xogta laga ZTE wareejiyo Device macruufka ee One Click
Qalab cajiib ah xogta aad ka mid qalab wareejinta si kale loo eegin madal ee OS ah waxa uu u adeegsanayaa waa MobileTrans by Wondershare. Software waa mid ka mid ah danabka badan mobile soo bandhigay by Wondershare ka dhigaya habka wareejinta xogta neecaw. Tani waxay ka mid-click qalab xogta kala iibsiga taageertaa ka badan 2000 oo lagu daydo casriga ah iyo taageerada dhammaan dhufto ee OS mobile. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka ee seenyada kasta oo u baahan in aad si ay u gudbiyaan xogta, sida wareegaya qalab cusub, casriyeeyo aad telefoon ama beddeli sidayaal smartphone.
The interface user cad oo fududeeyey ma aha oo kaliya awood kuu siinayaa in ay si cad u arkaan qalabka aad ku lifaaqan, laakiin sidoo kale si habsami idin Toosiya nidaamka oo dhan xogta kala iibsiga. Software la yaab leh ma laha qalooca uga yaacday ilaa waxbarasho iyo tan waxa ay taasi fududahay in la isticmaalo iyo user-friendly. Sidoo kale codsiga yimaado dhawr muuqaalada smart sida yareeyo kala iibsiga ee files leheyn, iwm
Si aad xog ka ZTE wareejiyo qalab macruufka ah ee la isticmaalayo Wondershare MobileTrans , waa inaad raacdo tallaabooyinka hoos ku qoran:
Wondershare MobileTrans Waxaa isticmaali kara qof kasta oo si fudud uma baahna xirfado gaar ah si ay uga shaqeeyaan barnaamijka. Software la yaab leh ma laha qalooca uga yaacday ilaa waxbarashada, iyo idin Toosiya nidaamka oo dhan wareejinta xogta hab fududeeyey.
• Tallaabada 01: Download, rakibi iyo abuurtaan MobileTrans aad kombuutarka.
1. Download version saxda ah ee codsiga software ah sida nidaamka hawl gal
2. Markii soo bixi, double-riix faylka eedeysanuhu.
3. Buuxi habka rakibo adigoo raacaya tilmaamaha ku-screen yimid.
4. Marka habka loo xirxiro la soo gabagabeeyo, double-riix icon toobiye ka desktop-ka.
5. suuqa kala furay, riix Start Hadda button in aan bilowno software ah.
6. Laga bilaabo interface furay, riix Start button muuqata ku dul ugu Phone in Transfer Phone qaybta.
7. Marka si loo soo dajiyo Lugood, raac fariimaha ku-screen si loo dhamaystiro hawsha.
Fiiro gaar ah : Haddii aad leedahay Lugood horay aad kombuutarka, aad iska indho tirin karo waano ah.
• Tallaabada 02: Connect labada casriga ah si aad PC.
1. Isticmaalka fiilooyinka USB kala ah labada casriga ah, iyaga xidhmi doontaa PC ee hada.
2. Si aad u gaar ah ee casriga ah aad la xiran si MobileTrans, si loo hubiyo in aad ka arki kartaa icon cagaaran xiran hoos ku calanka smartphone bandhigay interface ka.
3. Sidoo kale in la hubiyo in ay ZTE iyo qalab macruufka ah waxaa lagu soo bandhigay hoos Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybaha ay u kala horreeyaan.
Fiiro gaar ah : Haddii ay dhacdo in qalabka aan la soo bandhigay hoos qaybaha ku haboon, riix Flip button (ka dhexeeya laba qaybood) si ay si sax ah u dhig.
4. Sida doorasho ah, waxa kale oo aad dooran kartaa in aad masixi dhammaan xogta la soo dhaafay in lagu kaydiyaa qalabka macruufka by hubinta xog Clear hor nuqul checkbox ka geeska bidix hoose ee qaybtan meel loo ahaadana iyadaa u ah.
• Tallaabada 03: xogta Transfer ka ZTE si ay u qalab macruufka ah.
1. Laga soo Select content in aad nuqulka sanduuqa dhexeeya Source iyo meel loo ahaadana iyadaa qaybood, hubi checkboxes matalaya xogta in aad rabto in lagu wareejiyo.
2. Marka aad calaamad u tahay fursadaha la doonayo, riix Start nuqul ka button hoos ku Select content in aad nuqulka sanduuqa .
3. Sug ilaa MobileTrans ku wareejinaya faylasha xogta soo xulay aad ZTE in qalab macruufka ah.
4. Marka macluumaadka oo dhan la wareejiyo, riix OK button ka sanduuqa popup ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka go'do hanaanka wareejinta mar kasta oo ka mid ah wakhtiga, si aad u samayn kartaa adigoo gujinaya ka Cancel button ka geeska midig hoose oo ka mid ah ay Progress uu furmo suuqa.
Laga soo tago in ay awoodaan in ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya qalabka aad, Wondershare MobileTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan gurmad ah ee files xogta aad ku PC laftiisa. Tani software lagu naalloon karo waa xal kaamil ah haddii aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya qalabka aad ee hal-click. Tani waa ammaan ah, oo khatar la'aan iyo habka ka kaaftoomi-free meesha asalnimada aad content la hayo.
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga ZTE si macruufka Devices